Bangaphezu kwamathani ayi-12000 amazambane avuniwe esifundeni iBryansk - Potato System Magazine
Bangaphezu kwamathani ayi-12000 amazambane avuniwe esifundeni saseBryansk
Jul 30, 01:00
Kuzo zonke izifunda zesifunda saseBryansk, amabhizinisi ezolimo ayaqhubeka nokuvuna izitshalo zokusanhlamvu, okudlwengulwa namazambane.
Ngokusho kukahulumeni wesifunda, ngoJulayi 27, bakwazile ukubhula cishe amathani ayinkulungwane zamathani ayi-177 kumahektha ayi-41. Indawo ephelele yokuvunwa kwezilimo zokusanhlamvu nezilimo ezivuthiwe zingamahektha ayinkulungwane ezingama-299.
Kuze kube manje, ezifundeni eziyishumi nanhlanu, okudlwenguliwe sekuvunwe endaweni eyihektare eyizinkulungwane eziyi-11 - sekubhule amathani angaphezu kwezinkulungwane ezingama-37 embewu. Uhlelo lwagcwaliswa ngamaphesenti angama-35. Isithelo esiphakeme kakhulu sabadlwenguliwe saphawulwa ezifundeni zaseSevsky nase Mglinsky esifundeni.
Futhi ezifundeni zaseVygonichsky, Zhiryatinsky, Klimovsky, Navlinsky, Novozybkovsky naseStarodubsky baqala ukuvuna amazambane okuqala. Amathani angaphezu kwezinkulungwane eziyi-494 avunwa kumahektha ayi-12.
Source: Izindaba zeBryansk
Tags: Isifunda saseBryanskukuvuna amazambane